Igwefoto OnePlus 7 Pro: igwefoto okpukpu atọ nwere oghere telephoto 3X | Gam akporosis
Nke nta nke nta anyị na-amatakwu nkọwa banyere flagship OnePlus na-abịanụ. Anyị maara na a ga-enwe usoro ọdịnala na ụdị nke vitaminized. Na, na-ahụ ihe e ji mara ndị Igwefoto OnePlus 7 ProO yiri ka ụdị kachasị dị ike ga-enwe ngalaba foto zuru oke yana na ọ ga-enwe ike iguzogide ndị na-asọmpi ya n'ime nnukwu ọkwa.
Na, site na ntaneti ohuru, anyị enweela ike ikwenye na igwefoto OnePlus 7 Pro ga-enwe sistemụ okpukpu atọ nke ga-eme ndị ọrụ obi ụtọ site n'inye ndị zuru ezu njide. Ka anyị hụ ngwaike nke ga-arịgo igwefoto nke ngwaọrụ a.
Ntughari uzo di iche iche taa:
The #OnePlus7Pro ga-enwe kamera atọ:
1. 48MP Isi Anya
2. 8MP Telephoto Lens w / 3x mbugharị F / 2.4
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụgbọelu ma nwee ohere ịnweta Ama nke ngwaahịa a na - ahapụghị - DM me me pic.twitter.com/AV6UdjCvnE
Nke a ga - abụ igwefoto OnePlus 7 Pro: lens nwere okpukpu atọ nwere nkuku sara mbara na lens telephoto
Dị ka ị pụrụ ịhụ na ozi ezitere site na mmata onye leakster Max J, nke amara nke ọma dika Samsung_News_, the Igwefoto OnePlus 7 Pro Ọ ga-enwe oghere mbụ nke 48-megapixel, n'ezie ihe mmetụta Sony IMX 586, nke ihe mmetụta 16-megapixel nke abụọ nwere oghere oghere nke 2.2 na nke ahụ ga-arụ ọrụ obosara iji nye ihe onyonyo ruo 117 degrees.
OnePlus CEO na-ekerịta onye ọrụ OnePlus 7 teaser
N'ikpeazụ, anyị ga-enwe ihe mmetụta 8 megapixel ikpeazụ na ọnya ntụgharị uche 2.4 na nke ahụ ga-arụ ọrụ nke lens telephoto iji nye mbugharị 3x. N'ụzọ doro anya, anyị ga-echere maka ngosipụta nke ọrụ nke ngwaọrụ ahụ iji kwado ngalaba foto nke OnePus 7 Pro ga-arịgo, mana ọ dị ka igwefoto nke ụdị a ga-abụ ihe ijuanya.
Banyere akụrụngwa ndị ọzọ nke OnePlus 7 Pro ga-arịgo, a na-atụ anya na ọ ga-enwe Qualcomm Snapdragon 855 processor yana 6 ma ọ bụ 8 GB nke RAM na nhazi nchekwa dị iche iche n'etiti 128 na 512 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Na ọzọ May 14 anyị ga-ahapụ obi abụọ, ọ bụ ezie na-ewere n'ime isi iyi nke ihihi, ọ bụ karịa yikarịrị ka ọ bụ n'ezie Igwefoto OnePlus 7 Pro -bụ otu nke kasị mma na ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Nkọwapụta igwefoto OnePlus 7 Pro
Xiaomi kwadoro atụmatụ nke Redmi S3 na vidiyo
Ihe ngosi ọhụụ nke Pixel 3a na Pixel 3a XL bịara na-apụta